Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Puntland oo la dhaariyay. – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Puntland oo la dhaariyay.
Star FM January 1, 2019
Xubnaha cusub ee xildhiibanada baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa maanta waxaa lagu dhaariyay xarunta golaha wakiilada, iyadoo loo qeybiyay aqoonsiga cadaynaya xubinimada Barlamaanka Puntland.
Masuuliyiinta Maxkamadda Sare ee maamulka Puntland ayaa dhaariyay xildhibaanada cusub ee galinkii danbe ee shalay magacyadooda la shaaciyay.
Goobta lagu dhaarinayay xildhibaanada Cusub waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah waxgaradka deegaanada maamulka Puntland, kuwooda ugu caansan waxaana xildhibaanada cusub loo rajeeyay inay ka guul keenaan shaqada ay bulshada u hayaan.
Baarlamaanka Cusub ee maanta la dhaariyay ayaa guddoomiye kumeelgaarka ah waxay u doorteen Xildhibaan Xuseen Xaaji Yaasiin oo noqday qofka ugu da’da weyn ee xubnahaasi, wuxuuna xilkan sii haynayaa inta laga soo dooranayo gudoomiyaha rasmiga ah ee Golaha wakiilada Puntland iyo ku xigeenadiisa.
Sida uu qorshuhu yahay Saddexda Bishaan Janaayo ayaa lagu waddaa inay doortaan Gudoonka rasmiga ah baarlamaanka Puntland ka kooban 66 Mudane oo ay ku jirto hal gabadh ah inta kalena ay rag yihiin.
Ammaanka xarunta barlamaanka Puntland ee magaalada Garowe ayaa si aad ah loo adkeeyay iyadoo gabi ahaanba la xiray wadooyinka soo gala xarunta Baarlamaanka iyo kuwa ka baxa ciidamada ayaana manata muujinayay feejignaan dheeraad ah oo dhinaca ammanka la xidhiidha.
← Dowlada Turkiga ee ergay gaar ah u magacawday wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Madaxweynaha suudaan oo sheegay in doorasho xor ah ay dhaceyso →